Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်:အခမဲ့ Xxx ဂိမ်းကစားခြင်းဒီမှာ!
မင်္ဂလာပါအဲဒီမှာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ:နံပါတ်တစ်ခရီးအတွက်အွန်လိုင်းအားလုံးသင့်ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားလိုအပ်ချက်များ! ပထမဦးဆုံးဇူလိုင်လထဲမှာစတင်ခဲ့ ၂၀၁၆၊Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲရှိမြန်ဖြစ်လာသွား-မှရောက်ချင်သူလူများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားစွဲဂိမ်းပျော်စရာ။ သင်ကြားရကြပြီစေခြင်းငှါ၊ကျွန်တော်တို့အရှေ့က၊သို့သော်ယခုအချိန်အတွက်စီမံကိန္းကိုကိုယ်အဘို့! ဘာမျှလောက်ကြီးစွာသောကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းသည်ရိုးရှင်းသောတကယ်တော့သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်၊တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့!, သူတို့အားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဂိမ်းကစားထွက်ရှိလိမ့်မည်အားလုံးသိရှိခဲ့ပါပြီအကြိမ်အတိတ်အတွက်အဘယ်ကုမ္ပဏီတွေကတရားစွဲဆိုကျော်အလေးအဘို့အနိမ့်အရည်အသွေးထုတ်ကုန်:မဖြစ်တော့ဘူး! ကျနော်တို့ဒါကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချသင်ချစ်ရန်သွားကြသည်အထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကျနော်တို့ကွာပေးခြင်းတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ဒီမှာစိတ်ကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိမ့်မည်တေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်သင်ပေးရန်နှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာရှည်လျားအနာဂတ်ဆီသို့။ ဒီဘက်ပါ၊ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှတိုးမြှင့်ဝင္ေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်သင်တို့ကိုလျောက်ပတ်သောသင်သည်အဘယ်သို့ပေးရသည်သင်ချင်တယ်:အပူနှင့်ၡမ်ားဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ!, အခုအတူအသံအမျိုးအစားအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲသငျသညျစိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါ၊အခမဲ့ခံစားရတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အခုအချိန်မှာနှင့်အဘယ်သို့ထွက်စစ်ဆေးရဲ့အတွင်းပိုင်း။ ကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပိုသိဖို့အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်အောက်တွင်ချ:အပေးပါ့မယ်အားလုံးအသေးစိတ်အကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်!
သငျသညျအစဉ်အမြဲခံစားရရှိကြောင်းသိရသည်သိသာမရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရှိဂိမ်း? ကောင်းပြီအကောင်းသတင်းရှိသည်အများကြီးတစ်ငရဲကသူတို့ကို၏! ကနေရသွား၊အသင်းအသိအရေအတွက်ဖြစ်သွားခဲ့အဖြေလူတိုင်းရဲ့ဆုတောင်း။ မြင်၊လျှင်သင်ထားလျှင်သင်တို့ပြုသမျှကိုကြက်ဥသို့တဦးတည်းတောင်းနှင့်သာကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ဂိမ်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုသောသူမဟုတ်လူတိုင်းဖြစ်သွားနှင့်အတူပျော်ရွှင်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု။ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုဆက်ကပ်ရန်ဖြစ်သည်ျဖင့္ဂိမ္းအနှံ့လူအစုအဝေး၏အမျိုးအ။ ဒီဘက်ပါ၊လူတိုင်းနိုင်ပါတယ်သုံးစွဲသူများအတွက်နှင့်ပျော်မွေ့သောအရာတစ်ခုခုရဲ့အပေါ်အခြားဘက်ခြမ်း။, ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အောင်စတင်နှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ဟုယုံကြည်ထိုရလဒ်များကိုမိမိတို့အဘို့စကားပြောဆို။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်တစ်ဖွဲ့လုံးတွင်အိမ်ရှင်များအနှံ့အပြားကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးအစား-အခြေခံ niches။ လို့ပြောလုံလောက်ယုံကြည်လျှင်အမျိုးမျိုးအမွှေးအကြိုင်များ၏အသက်၊သင်ဖြစ်သွားကြသည်ကောင်းသောလက်၌။
ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းကျနော်တို့အများကြီးရှိသည်အမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်ကြီးမားနံပါတ်များ၊မထင်ကြဘူးတစ်စက္ကန့်အဘို့အကြောင်းဂိမ်းများမဟုတ်ကစားရန်ပျော်စရာ။ ကျနော်တို့အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ဂိမ်းအလွန်အမင်းအရေးကိုယူမှကြွလာသောအခါလိင်ဂိမ်းအွန်လိုင်း-ဘငှားရမ်းအကောင်းဆုံးဂိမ်းစာရင်းသွင်းဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များပေးသင်ဂိမ်းချင်တယ်။ ကအကြောင်းပြောဖို့လုံခြုံ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲရှိမျောတက်အပေါင်းတို့သည်ပြိုင်ပွဲနှင့်ပြသတခြားလူတွေဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။, ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ၊သင်ရုန်းကန်ပါလိမ့်မယ်လက်အသိုင်းအဝိုင်းကထင်သူတို့ကအမှန်တကယ်ကောင်း၏သောကြောင့်၊ငါတို့သည်သူတို့ကိုရိုက်နှက်ထွက်ရှိသမျှတစ်ခုတည်းအချိန်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအရေးယူအချို့ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအင်တာနက်ပေါ်နှင့်ပင်သင်ဖယ်ရှားလိုလျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးဓာတ်ကို၊ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းလူအဆဲပြန်လာပြီးကစားဂိမ္းမ်ား–ကိုယ့်ဝင်ဖို့အရှည်မယ်သွားကြဖို့နိုင်ရန်အတွက်သင်ပေးရန်နှင့်အတူကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းၡမ်ားဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။ လက်ရှိအမျိုးအစားများ၏ဘွဲ့ဆက်ကပ်မည်ဖြစ်ကျယ်ပြန့်အပေါ်သို့ကျော်ကိုလာမယ့်လနှင့်နှစ်ဆက်ပြီးနားထောင်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အပေါ်အနာဂတ်ထုတ်လုပ်ပြီးကျနော်တို့ကဒီမှာမှာ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ!
မဟုတ်ပေမယ့်လူတိုင်းလိုလားကြတဲ့ပြည်သူလူထုအခြေပြုလိင်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံ၊အများအပြားဂိမ်းများရှိပါတယ်ထွက်ပါဘူး။ ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဤအချက်ကိုကျွန်တော်တို့အယူအပေါ်သို့ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းရန်အများအပြားလူမှုအသိုင်းအင်္ဂါရပ်သောလူအေတာင္းဆိုသည္။ ဤပါဝင်သည်တစ်ဖက်ဆာဗာ၊တရားဝင်ဖိုရမ်၊အဘော့နဲ့ပိုပြီး။ အဆိုပါအဖွဲ့ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုစနစ်နှင့်တွမ်။ သင်ထင်လျှင်သင်ရှိသည်ဖို့ယူအဘယ်သို့ဆန့်ကျင်တက်သွားတဲ့အကောင်းဆုံးလိင်ဂိမ်းအပေါင်းတို့၏အချိန်၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုဤသည်အလွန်အကောင်းဆုံးနေရာအတိအကျကိုပြုမည်!, ကျွန်တော်လက်ကိုမှန်မှန်ဆုသူများအတွက်ပြပြီ၊မိမိတို့အဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံး။ မြန်နှုန်းအပြေးသမားကြိုဆိုကြောင်းနှင့်သင်တွေ့လိမ့်မည်အလွန်အထောက်အလိမ့်မည်လူထုညှစ်ထုတ်တိုင်း၏နောက်ဆုံးအပိုင်းအပြိုင်အဓိတွင်းသင်။ သူတွေကသူတို့ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကအဆိုပါဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့နိုင်တင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒီမှာ။ သင်တန်း၏၊လျှင်ပေါ့ပေါ့စား၊သင်ဆဲသွားလက်ျာဘက်ရှေ့ဆက်နှင့်ပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုများစနစ်။ ဒီတက်မြေပြင်ကနေတည်ဆောက်လူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဂိမ်းကစားမှန်မှန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ။, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်၏ကြက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အလွန်အချိန်အားဖြင့်ပြီးစီးလျက်ရှိ။ ရုံသေချာအောင်သင်ကြိုးစားရအားလုံး၏အောင်မြင်မှုများပြုမီသင် jizz၏ဝန်။
သောအဖွဲ့က Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲများအပြားရှိပါတယ်ကြီးမားသောအစီအစဉ်များ။ ကျနော်တို့လုံးဝသေချာမလတံ့သောအရာကိုပထမဦးဆုံးလာ၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုသိတဲ့ကျနော်တို့အများကြီးရှိသည်အမှုအရာအတွက်ပိုက်လိုင်းပြီးလျှင်အပြာ-အခြေခံစား၊သင်ရချင်အတွက်နောက်ကျတာထက်။ အစမှ၊ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြသည့်ထိရောက်သောလိင်ဂိမ်းအသိုင်း:အခုအချိန်သင်တို့အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အဘယ်အရာကိုမြင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအခြေခံခရီးပတ်ပတ်လည်ဤအယူအဆတူလှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမှအသောစကားပြောခြင်းပြု၊ဒါကြောင့်ယခုလာသာနှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်ဘယ်လောက်အံ့သြဖွယ်အမှုအရာ။, ကျနော်တို့ကအမှန်တကယ်အပူဆုံးဂိမ်းနှင့်များစွာသင့်အဘို့ထိုသူတို့အထဲကကြိုးစားမှ-ဒါကြောင့်သင်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ? တက်လက်မှတ်ထိုးဘို့သင့်အခမဲ့အကောင့်ကို၊ယခုအတွင်းအပြင်၊ပြင်ဆင်အုန်းသီးရေနံနှင့်လိမ့်မယ် jerking ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိုက်အတွက်အချိန်မှာအားလုံး။
ဘို့သင့်ကိုငါသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါဖို့သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူဖတ်ရန်ဤမိတ်ဆက်စကားကိုကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ပျော်ရွှင် fapping!